Awooda ama Mawaadiicda: Cajiibka Naqshadee Waxyaabaha Laga Yeelo
Si loo gaaro heerarka sare ee Google waa muhiim in la fahmo shuruudaha Google ee ku habboon si loogu daro xogta. Algorithm ee abaabulidda iyo macluumaadka macluumaadka internetka waa adag tahay in la fahmo. Waxay ku lug leedahay kumanaan doorsoomayaal ah oo go'aaminaya jagada ku jirta natiijooyinka raadinta. Si kastaba ha ahaatee,Isbedelka Mashiinka Searching (SEO) waa mid si fudud loo fahmi karo iyada oo la caddeeynayo laba arrimood: Awooda iyo ku-oolka.
Andrew Dyhan, Maareeyaha Guusha Macaamiisha Sare waxay sharaxeysaa faa'iidada iyo khasaarinta doorashada madax iyo tixgelin sida qaybaha ugu muhiimsan ee diiradda saaraya - termostato ambiente digitale bticino axolute.
La isku waafaqsan yahay in bogga uu ku habboon yahay a weydiinta qeexan. Inta lagu jiro marxaladaha horumarinta bilowga ee SEO, tixgelinta raadinta waxay ku koobnayd ereyada muhiimka ah ee loo adeegsaday weydiinta. Ereyada muhiimka ah ayaa lagu barbardhigay ereyada muhiimka ah ee lagu muujiyey bogga la tiriyey. Algorithm isbedel, soo bandhigid istaraatejiyado waxgal ah oo SEO ah, oo falanqeyn kara ujeedada raadiyaha. Natiijooyinka la soo saaray waxay ku haboon yihiin sababtoo ah waxay ku habboon yihiin baahida iyo danaha dadka isticmaala.
Ereyada ayaa wali ah wajiga muhiimka ah ee istaraatiijiyada SEO. Si kastaba ha ahaatee, xiriirka ayaa muhiim u ah sii socodka raadinta. Kala xulashadu waxay la xiriirtaa hababka kale, sidoo kale, tusaale ahaan,aqoonsiga suuqa suuqa, xulashada mawduucyada ku haboon ee suuq geynta iyo, dabcan, raadinta ereyga muhiimka ah.
Awooda waxay muujinaysaa heerka qiimaha iyo kalsoonida webka boggu wuxuu muujinayaa. Maamulka wuxuu leeyahay laba nooc. Qeybinta koowaad waa hay'ada maamulka ee matalaya guud ahaan bogga. Qeybta labaad waa bogga bogga oo muujinaya heerka sumcadda bogga la bixiyay. Markii hore, Googlewaxay falanqeeyeen dhibcaha awoodda iyadoo la adeegsanayo cabirka PageRank ee qiimihiisu yahay 0 ilaa 10. Buundada PageRank hadda ma'aha mid aan khuseynmaxaa yeelay Google ma cusbooneysiiyo qiimaha..
Awooda domain waa istaraatijiyad qiimeyn la door biday. Maamulaha domain wuxuu xisaabiyaa waxqabadka ganacsiga ee matoorada raadinta, marka la barbardhigo waxqabadka tartamayaasha. Dhibcaha raadinta waxaa lagu xisaabiyaa ku salaysan tayada tirada ee xidhiidhada soo-galootiga ah. Awoodda Domain waa wax ku ool ahmarka loo eego shuruudaha PageRank sababtoo ah waxay dhalinaysaa dhibco 0 ilaa 100.
Haya'daha views Google ayaa ku tiirsan dhowr arrimood. Googlewaxay bixisaa dhibco badan oo dheeraad ah haddii website uu si wax ku ool ah ugu shaqeeyo qalabka kombiyuuterka iyo kuwa gacanta. Google wuxuu hagaajiyaa awooddaee goobta haddii xiriirada soo-galooyinku ay yihiin tiro iyo tayo sare. Waxqabadka farsamo, rafcaan, iyo qaab dhismeedka goobta sidoo kale waxay muhiim u tahay kor u qaadista awoodda.
Xaaladaha qaarkood SEO, maamulka ma aha mid muhiim ah. Tusaale waa marka adigoo isticmaalaya erey door ah oo aan isticmaalin goobo kale. Si kastaba ha noqotee, ganacsigu waa inuu lahaadaa heer sare oo heer sare ah marka la isticmaalayo erayada muhiimka ah kuwaas oo si aad ah u isticmaala rakibayaasha matoorada raadinta.
Awoodda aan laheyn
Ma fududa inaad galaan goob leh awood leh laakiin ma ahan mid ku habboon.Tani waa sababta oo ah sida bogga uusan diirada saarin mowduuc ama goob la siiyo. Nasiib darrada ereyada 'niche keywords' ayaa ka dhigaysa mid dhib badanIsticmaalayaasha si ay u helaan goobta bogga raadinta Google.
Waxaa jira bogag daabacan oo leh heerar sare sumcad. Sumcadda muhiimka ah waxay hagaajineysaa qiimeynta goobaha goobahaas, tusaale ahaan, Forbes.com, TechCrunch, iyoHuffingtonPost.com. Meelahani waxay leeyihiin muuqaal sare, xitaa haddii ay daabacaan macluumaadka mawduucyo kala duwan. Wargeysyadawaxay soo saareen magac tayo leh oo leh awood waxtar leh. Xidhiidhka yaryar wuxuu ka dhigayaa goobaha la qadarin karo ku dar sare ee natiijooyinka raadinta Google.
La isku waafaqsanaanta iyo awoodaha waa in loo isticmaalo si loo hubiyo a Ololaha waxtarka leh ee SEO. Si kastaba ha noqotee, marxaladaha hore ee geedi socodka SEO, waxaa muhiim ah in la xoojiyo feejignaanta. Taniwaa sababtoo ah awoodda ayaa noqota mid muhiim ah haddii dadka isticmaala bogga ay ku dari karaan waxyaabaha ay ku qoran yihiin goobta.